လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို တစ်ရက်အများဆုံး အသုံးပြုမှု ယခင်နှစ်ထက် (၇) ရာခိုင်နှုန်းခန့်ပိုများ | MRTV-4
ယခု (၂၀၁၉) ခုနှစ်အတွင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို တစ်ရက်ကို အများဆုံး အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ပမာဏဟာ အရင် (၂၀၁၈)ခုနှစ် က သုံးစွဲခဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပမာဏထက် (၇) ရာခိုင်နှုန်းခန့်ပိုမိုသုံးစွဲခဲ့တယ်လို့ ဇွန်လ(၁၃)ရက်က နေပြည်တော်ရှိ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရုံးမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ က သိရပါတယ်။ လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ လွန်ခဲ့တဲ့(၂၀၁၇)ခုနှစ် တစ်ရက်အတွင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအများဆုံး အသုံပြုခဲ့တဲ့ ပမာဏဟာ (၆၃. ၉၄)ယူနစ်သန်းရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ (၂၀၁၈) ခုနှစ်မှာတော့ တစ်ရက်ကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအသုံးပြုတဲ့ ပမာဏဟာ (၆၈ . ၈၈) ယူနစ်သန်း အထိ တိုးတက်သုံးစွဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။(၂၀၁၉) ခုနှစ်မှာ တစ်ရက်ကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲတဲ့ ပမာဏဟာ (၇၃ . ၇၆) ယူနစ်သန်းအထိ တိုးတက်သုံးစွဲလာတာကြောင့် အရင် (၂၀၁၈) ခုနှစ်ထက် (၄ . ၈၈) ယူနစ်သန်းပိုမိုတိုးတက်သုံးစွဲခဲ့ပြီး ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၇) ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ လက်ရှိမှာ လိုအပ်တဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတွေရရှိစေရေးအတွက် ပြည်တွင်းမှာ ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ (၂၈)ရုံကနေ စက်တပ်ဆင်အင်အား (၃၂၂၅) မဂ္ဂါဝပ် ၊ အပူစွမ်းအင်သုံးဓာတ်အားပေးစက်ရုံ (၂၁)ရုံကနေ စက်တပ်ဆင်အင်အား (၂၄၀၂ . ၂၉)မဂ္ဂါဝပ်၊ ကျောက်မီးသွေးသုံးဓာတ်အားပေးစက်ရုံ(၁)ရုံကနေ စက်တပ်ဆင်အင်အား(၁၂၀)မဂ္ဂါဝပ် အပါအ၀င် စက်တပ်ဆင်အင်အား (၅၇၄၇ .၂၉) မဂ္ဂါဝပ် ကိုရယူပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးပေးနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဆိုပါပမာဏဟာ စက်တပ်ဆင်အင်အားသာဖြစ်ပြီး အမှန်တကယ်ထုတ်လုပ်နိုင်မှု အနေနဲ့ ဓာတ်ငွေ့ရရှိမှု အခြေအနေတွေ၊ ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတွေအတွက် ဆည်အတွင်း ရေ၀င်ရောက်မှု နည်းပါးခြင်းတွေကြောင့် ဇွန်လ(၇) ရက် စာရင်းတွေအရ (၃၀၄၆)မဂ္ဂါဝပ်သာ ထုတ်လုပ်နိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။